“ကျနော်ဓါတ်ဖမ်းသမား” (၁၁) (ဓါတ်ပုံတစ်ပုံအတွက်အရင်းအနှီး) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » “ကျနော်ဓါတ်ဖမ်းသမား” (၁၁) (ဓါတ်ပုံတစ်ပုံအတွက်အရင်းအနှီး)	11
“ကျနော်ဓါတ်ဖမ်းသမား” (၁၁) (ဓါတ်ပုံတစ်ပုံအတွက်အရင်းအနှီး)
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Jun 7, 2015 in Creative Writing, My Dear Diary, Photography | 11 comments
1 ညဉ့် ဦး ယံ
တကယ်တော့ အခုခေတ်မှာဓါတ်ဖမ်းတယ်ဆိုတာက လဲ ငွေနဲ့စက်ပြီး
အခုခေတ်ကတော့ အမြင်ကပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင် ဖူးဖရိန်ဘော်ဒီတစ်လုံးလောက်သာဝယ်ပေးလိုက်ပါ။
အဲဒါရတာနဲ့ မှန်ဘီလူးပြောင်းတို ပြောင်းရှည်ပြောင်းလတ် မြင်ကွင်းကျယ်တွေ ငါးမျက်လုံးတွေ အဏုစိတ်တွေ
ထရိုင်ပေါ့တွေ ဖစ်လတာတွေ ၀ယ်ရင်း ၀ယ်ရင်းနဲ့သိန်းရာချီကုန်မှာသေချာပေါက်ပါဘဲ။
ရိုးရိုး ခရော့ဖရိမ်တွေရဲ့မှန်ဘီလူး ဈေးထက်စာရင် ဖူးဖရိန်ရဲ့ဈေးက ထက်ဝက်မကကွာပါတယ်။
သိပ်မကြာခင်ကာလကတော့ သိန်းတစ်ရာ ဆိုတဲ့
စတေးတပ်လေးကြောင့် ဓါတ်ဖမ်းသမားများအကြား ဖေစ်ဘုတ်စာမျက်ပေါ်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်သွားပါတယ်။
ဓါတ်ပုံကောင်းတစ်ပုံရဘို့ အတွက် ငွေအဲလောက်သုံးနိုင်မှ ပုံကောင်းတစ်ပုံရမရလို့မေးရင်
အဖြေရခက်တဲ့မေးခွန်းလို့ထင်ရပေမယ့် တကယ်တော့ အတတ်ပညာမပါဘဲ ပုံကောင်းတစ်ပုံ
အဲဒါတွေမရှိရင်တော့ လူအပင်ပန်းခံနိုင်မှ ပုံကောင်းတစ်ပုံ ရမှာအမှန်ပါဘဲ။
ဘယ်ဟာက ပိုကောင်းတယ်လို့ မဆိုနိုင်ပေမယ့်
အထောက်အကူပစ္စည်းသုံးပြီးဖန်တီးထားတဲ့ ပုံ နဲ့
ကင်မရာက ပေးတဲ့ အနေအထားအတိုင်း ရိုက်တဲ့ပုံ ထပ်တူမညီနိုင်တာကတော့ အမှန်ပါဘဲ။
ဥပမာပေးရ ရင် ပင်လယ်ပြင်မှာ ညနေခင်းလို့အရောင်မျိုးကို လိုချင်ရင်
ဖစ်လတာမရှိသူကတော့ ညနေခင်းထိ ထိုင်စောင့်ရိုက်ရမှာမှန်ပေမယ့်
ဖစ်လတာရှိသူကတော့ နေ့ခင်းကြောင်တောင်မှာ သူလိုချင်တဲ့အနေအထားရအောင် ရိုက်နိုင်ပါတယ်။
ကြယ်လေးတွေပွင့်သလိုအလင်းဖြာချင်ရင် စတားဖစ်လတာ တပ်ရိုက်ရင်အလွယ်နဲ့ရသလိုပေါ့။
အချို့သောအနေအထားများမှာတော့ အထောာက်အကူ ပစ္စည်းမပါရင်
ကိုယ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ ပုံကောင်းတစ်ပုံရဘို့ အတွက်
ပါတ်ဝန်းကျင်အနေအထား သဟဇာတ ဖြစ်မူ့ အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။
ဒီတော့ပုံကောင်းတစ်ပုံရဘို့ဆိုတာ ငွေသုံးနိုင်သူ ပစ္စည်းကောင်းသုံးနိုင်သူသာ
ရနိုင်တယ်လို့ ယတိပြတ်မဆိုနိုင်ပေမယ်လည့်း ကိုယ်တတ်နိုင်လို့
၀ယ်သုံးနိုင်ရင်တော့လဲ ကိုယ့်အတွက်ကောင်းတယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။
ဆိုတာတွေကလည်း ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတစ်ခုထည်းကြည့်ပြီး ရိုက်လို့မရပါဘူး။
သူတို့စိတ်ကျေနပ်အောင် ကူညီချင်အောင် ထိုက်သင့်သလို့ တော့
ကျနော်သင်တန်း တက်ပြီးတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ ပုံတွေကိုကြည့်တဲ့အခါ
ကျနော်သိပ်ကြိုက်တဲ့ အားလုံးကလဲ ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ ပုံအတော်များများက
အထောက်အကူပစ္စည်းရဲ့အကူအညီနဲ့ ရိုက်ထားတာ ကိုသိလာတဲ့အခါ
ငါရိုက်တဲ့ပုံက သူတို့ ကို ဘယ်တော့ မှ မမှီနိုင်
ကျနော်ကိုယ်တိုင်ကလဲ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံကို နည်းပညာသုံးပြီး လွန်ကဲစွာ
အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖန်တီးယူမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကို ပြန်မွေးပြီး
3 ဖြာ ဆင်း
ဒါပေမယ့် ပြိုင်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကတော့
ဓါတ်ပုံ ဆိုတာလဲ အနုပညာပစ္စည်းတစ်ခုပါဘဲ။
အာရုံရှိနေတဲ့အတွက် စိတ်က တည်ငြိမ်လို့နေတာအမှန်ပါဘဲ။
ဖုန်းနဲ့ရိုက်တာ လဲ ဓါတ်ပုံပါဘဲ။
ဖူးဖရိမ်နဲ့ ရိုက်တာလဲ ဓါတ်ပုံပါဘဲ။
ဘာနဲ့ရိုက်ရိုက် အနုပညာဆိုတဲ့ခံစားမူ့ နဲ့ ရိုက်နေသမျှ ဓါတ်ပုံလို့ သတ်မှတ်ချင်ပါတယ်။
အဲတော့ ဓါတ်ဖမ်းဝါသနာပါသူများက ဖမ်းသာ ဖမ်းကြပါ။
Alinsett @ Maung Thura says: နံပါတ် ၁ ပုံလေးက လေးပေါက် ဟိုအရင်တစ်ခါက တင်ဖူးသလားလို့… ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် တပါးသူ တင်ပြတဲ့ ဓါတ်ပုံ ပိုစ့်တွေဝင် ကြည့်ပြီးတိုင်း…
အဲ့လို ရိုက်တတ်ချင်လိုက်တာ…ဆိုပြီး ပိုးက ဝင်လာတတ်တယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11642
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: တင်ဘူးမယ်ထင်ပါတယ်။
ပုံစံတူလေးတွေလဲ ရိုက်ထားတာ များပါတယ်
မြစပဲရိုး says: 3. ဖြာ ဆင်း ကို အရမ်းအရမ်း ကို သဘောကျပါတယ်ဗျို့။ :-))
ဂျက်စပဲရိုး says: ကျနော့် ကို အမြင်ကတ်ကြပါလားဟင်….
nikon D810 လေး လိုချင်လို့ဘာာာာ :P
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကိုဂျက်
ဘော်ဒီဘဲရမယ် မှန်ဘီလူးကတော့ ကိုယ့် ဘာသာကိုယ်ဝယ်ဆိုရင် သေဘီဆရာ ဘဲနော်
ဂျက်စပဲရိုး says: ရတယ်ဗျ
အဲ့ ၈၁၀ လေးပဲ လိုချင်တာ :P :P :P
aye.kk says: အားလုံးလှတယ်၊
တောင်ပေါ်သား says: ဝါးပင်လေးတွေ သဘောကျသဗျာ
Mike says: .ညဉ့် ဦး ယံ ပုံလေးသဘောကျတယ်
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဘုရားပုံကတော့ မန်းလေးက ကျောက်တော်ကြီးဘုရားပါ
၀ါးပင်လေးတွေက တော့ ရွှေလီမြစ်ကမ်းနံဘေးမှာပါ
ဖိုးထောင် says: လှတယ်ဒါပေမယ့် ဘီယာလေးလိုတယ်